Kungase kwenzeke ukuthi kubalulekile ukuba Sinqanda ukufinyelela emininingwaneni amasayithi. kungaba zaziningi izizathu zalokho: isifiso ukugxila okhishiwe othile, hhayi hang iyiphi isayithi, ukuze kukhawulwe amathuba yengane Okwezwe ucwaningo Wide Web noma enye into. Kodwa ukuthi kusetshenziswe kanjani-ke? Indlela ukuvimba iwebhusayithi ukuthi akunjalo ukuvula, futhi akekho owakwazi ubone okuqukethwe kwalo?
Okusho Ilokhi emasayithini khompyutha?
Ngaphambi kokuba siphendule lo mbuzo, indlela yokuvimba iwebhusayithi ukuthi akunjalo ukuvula, udinga i empendulweni yomunye umbuzo. Okokuqala, siyini yokuvala? Lokhu ukungabi nakwenzeka kwento ukufinyelela ethile inethiwekhi isisetshenziswa ngenkathi sigcina izimo yokusebenza yamanje. Uma uzama ukungena umyalezo azoboniswa isayithi ivinjiwe ukuthi Insiza ayitholakali noma ivinjiwe. Futhi inketho lokuqala luncanyelwa isizathu sokuthi abantu abaqondi ukuthi ikhiyiwe futhi kungaqali ukubheka impendulo yombuzo kanjani ukuvimba amawebhusayithi kukhompyutha yakho nendlela ukuwavula. Kwezinye izimo, iziphequluli ukunikela okukhethwa kukho okujwayelekile ukuze anqobe le nkinga, okuyinto, njengoba ungakwazi ukuqonda, musa asize. Kodwa umbono amasayithi avinjiwe akunakwenzeka, uma ukwenza umyalelo ejwayelekile.
Kuyinto into eyodwa - ukuba Sinqanda ukufinyelela emininingwaneni amasayithi kukhompyutha eyodwa. Futhi omunye Izinga - ufinyelelwe yonke inethiwekhi. Ngakho, i-isinyathelo elikhulu samuntu sokuqala ukucushwa kukhompyutha. Kodwa lesibili, noma ungathola wonke amakhompyutha yena, noma ukubeka umkhawulo kuya (router, iseva). Yiqiniso, samuntu yesibili akukhetha kakhulu isikhathi ukudliwa. Kodwa uma ufuna ukushiya kwabanye abasebenzi ithuba lokuvakashela ngokukhululekile kuwo wonke amasayithi, ngeke isebenze.
Impendulo elula umbuzo kanjani ukuvimba amawebhusayithi kukhompyutha yakho - kuyinto ukuhlela ifayela lokuvikela ikhompyutha. Yenza amafayela usesho kukhompyutha yakho bese uthayipha yokusesha ibhokisi Sebawoti igama. Umshini izokubonisa ifayela kwi drive C - uyinto udinga futhi. Uyisebenzise. Cishe, uthola ukuthi ikhompyutha ayikwazanga ukubona, uvula ifayela. Bese uchofoza ku- ngayo inkinobho yegundane kwesokudla bese ukhetha "Vula." Ohlwini samanje izinhlelo, funa notebook bese uyikhetha it.
Ku-window esivula, ukuhamba kuze kube sekupheleni wefayela, bese ufaka: 127.0.0.1 ikheli laleli sayithi ivinjiwe.
Londoloza ifayela naseduze. Finyelela amasayithi avinjiwe nge ifayela elifana nalelo komiyuter ngeke babe. A inothi encane lekusasa: ukuhlela leli fayela ngumsebenzisi ne umqondisi. Futhi uma wesaba ukumosha into, ungenza ikhophi ifayela ukuhlelwa ngaphambi kokuba wenze izinguquko ukuze uphinde uthole ukufinyelela amasayithi avinjiwe esikhathini esizayo.
Ukusungula ukukhiya kwi-router
Uma kukhona i-computer eyodwa kuphela, inguqulo yangaphambilini ngeke ngokugcwele zonke izicelo. Futhi uma usebenzisa umzila kanye nethuba ukuya izindawo ezihlukahlukene nge-tablet noma smartphone? Ngenxa yalesi simo, kukhona ukuvaleka router. Thatha ubuholi akho ephoyinti lokufinyelela futhi zibheka yena ukuba ulwazi ezifana ikheli internet, igama lomsebenzisi nephasiwedi. Faka ikheli le-ezitholakala isiphequluli ke ifomu - login nephasiwedi. Khona-ke wena izotholakala iphaneli nomqondisi.
Kwake kwathi ngo-iphaneli yokuphatha, kufanele babheke ukuthi kungenzeka kwesizinda ukukhiya. imizila abaningi endleleni simiswe ngalendlela lelandzelako: iya ku "Izilungiselelo" bese ucinga "zokuhlunga" noma "lesizinda Ilokhi." Kumele kube khona interface elikuvumela ukuxazulula zonke kodwa lesizinda ezithile. Kuyadingeka ukuba ucacise ukuthi bayaphi akakwazi, chofoza inkinobho isicelo futhi iqalise router.
Ukukhiya nge izandiso isiphequluli
Uma le ndaba lapho Ilokhi ligcinwe, futhi, isebenzisa i-Google Chrome noma i-Firefox, singakwazi ukusetha umkhawulo kulezi iziphequluli. Ukuze wenze lokhu, kumele uye wesenzelo kwesigaba nokubhala into efana block Site noma "ekuvimbeni amawebhusayithi". Futhi uzoboniswa anhlobonhlobo izengezo ukuthi bangavimbela amasayithi akhethiwe wena. Lesi sinqumo impendulo enhle kakhulu umbuzo kanjani ukuvimba amawebhusayithi kukhompyutha yakho, ngoba bambalwa kakhulu abantu unombono ucabange indlela ukuhlola izandiso zakho. Lokho akuzange ukuhlelwa noma zikhutshaziwe ngomunye umsebenzisi, ukunwebeka kungenziwa livikelwe ngephasiwedi. Naphezu kalula ukufakwa, ngenqubo enjalo, kukhona eyodwa ethile kunalokho abalulekile - uma ususa isiphequluli sakho (bese ulufaka), noma kakhulu ukunwebeka (kufolda lapho), ukuvikelwa - asisekho.
The kungenzeka umthetho
Kodwa nakhu ukuthi ufake isayithi livinjelwe, ukufinyelela okuyinto kunqandwe izindlela ezishiwo ngaphambilini? Ikhono ukundlula lock sibeke ngempela okuningi. Ezinye zazo kungenzeka zingasebenzi ngaphansi kwezimo ezithile. Ekuqaleni, kufanele sikhumbule anonymizers - amawebhusayithi akhethekile ezikuvumela uthole impendulo imibuzo ezidingekayo. Kodwa ngaleso izicelo efanayo akuzona kuvela ku-IP-ikheli yomsebenzisi, futhi kusukela anonymizer ubuso. Ake sithi othile wazibuza ukuthi ukuvimba amawebhusayithi kukhompyutha yakho, futhi ufuna naye ukuba ngimbuze ngokwanele. Isikimu simiswe ngalendlela lelandzelako: wena ukuthumela idatha ku-website othize. Uthi mababuye umthombo inethiwekhi ukuthi ufuna ukuvakashela. Impendulo ozayo anonymizer. Futhi ulwazi etholakale kuthunyelwa kuwe. Yini embi ngalo lokhu nokuxhumana kuyinto ephansi idatha izinga, kodwa inhloso enkulu - kokuthola ukufinyelela - wenziwa. Lokhu akuyona impendulo yombuzo othi kanjani ukuvulela isayithi livinjelwe, kodwa woza ke namanje kwenzeka.
Futhi ukundlula lock, ungasebenzisa isofthiwe ekhethekile. Omunye elidume kunawo wonke isiphequluli "Thor." isimiso sayo wokusebenza kufana anonymizer, ne umehluko ukuthi ukudluliswa kwemininingwane phakathi umsebenzisi hhayi kunoma yimuphi iseva, kodwa phakathi abasebenzisi kuphela ngokwabo, futhi senze njengoba iseva bese ngikupha abanye abantu. On isibonelo izobukeka kanje: sezwe somsebenzisi A sinqatshiwe ukuvakashela indawo B, abasebenzisi kuleli zwe asivunyelwe ukuvakashela umsebenzisi site AD kuya phambili imibuzo nomunye, futhi lolu hlelo wenza isicelo kusukela umamukeli, bese ibuyisela idatha kulabo empeleni unesithakazelo. Kodwa ukusebenzisa 'Thor "kufanele ngokuhlakanipha - ngokuqondene izakhiwo Uhlelo ukwambula futhi lithumele othile igciwane, iThrojani, noma umane nokunciphisa idatha efana nephasiwedi kusayithi - akusiyo umcimbi Amazing kakhulu.
Nazi impendulo ezimbili ethandwa kakhulu, baya lapho baye benza izigidi, uma kungekhona amashumi ezigidi abasebenzisi, ekuphenduleni bona umbuzo kanjani ukuya site ivinjiwe.
Kodwa kukhona enye inguqulo kwezibambo zesihluthulelo - ukudalwa uhlu white amasayithi. Lolu khetho inikeza ukuze kwakhiwe uhlu lwamakheli lapho ungaya. Ukuthola noma ukuthumela idatha ku-bonke abanye ngeke bavinjelwe. Ukukhetha isofthiwe ekufanele ilula, kanye nezinhlelo ukuthi basakazwa mahhala futhi ngesikhathi esifanayo babe ukusebenza kudingekile, ezihlukahlukene kakhulu. Ngakho-ke, ukukhetha indlela ukuvimba amawebhusayithi kukhompyutha yakho, kuyafana kuwe.
Isihloko wahlola amathuba ezihlukahlukene zivimba ukufinyelela ezihlukahlukene izinsiza ezibonakalayo, hhayi kuphela indlela ukuvimba amawebhusayithi kukhompyutha yakho, kodwa nokuthi ukwenze kanjani ukuze uvule. Uma into efana ke, ungasebenzisa iphupho elimnandi.
Uhlelo Ifayela - kungcono ... izinhlelo yefayela: uyini FAT futhi NTFS. uhlelo ifayela Android
Abangemthetho eJalimane: Life ngemva kokususwa